कहिले हट्छन् अर्दली आईजीसा’प – TajaNepal
Home /Blog/कहिले हट्छन् अर्दली आईजीसा’प
समाचारMay 18, 2018
कहिले हट्छन् अर्दली आईजीसा’प
काठमाडौं । देश गणतन्त्रमा गएको छ । सिंहदरबारको सत्ता प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । मन्त्रीमण्डल आठवटा छन् । राज्यको खर्च बढेको छ । मालिकले नोकर, दासदासी राखे जस्तो १८औं शताब्दीको झल्को सुरक्षा अंगहरुमा छ । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन राजनीकि दलहरुले समेत नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका तल्लो तहका जवानहरुलाई सित्तैमा कजाएका छन् । सरकार इमान्दार मान्छेको खोजीमा छ । इमान्दराले संगठनको अस्तित्व बचाउँँछन् ।
सरकारले प्रशासनिक तहको काम गर्ने समय दश बजेबाट पाँच बजे तोकेको छ । सुरक्षा फौजको समय २४ घण्टे हुन्छ । कसम खाँदैमा संगठनको हित विपरित जानेछैन भन्ने वाचा गराइन्छ । तर आपूm सामन्त चरित्रका सेना र प्रहरीका घरमा नोकरको रुपमा तल्लो तहका केटालाई राखेको देखिन्छ । प्रहरीमा केही परिवर्तन आएको छ । घर पालुवा नोकर राख्ने चलन हटेको छैन । भ्रष्टाचार काण्ड लागेका उपल्लो तहका हाकिमका घरमा प्रहरीकै नोकर राखिएका छन् । तलब राज्यको खाने, काम हाकिमको घरेलु नोकर ! नेपाल प्रहरीभित्रको लोकतन्त्र यही हो ?
कुन हाकिमले एक ड्राइभर, एक सहयोगी कति समयका लागि पाउने हो ? लिखित कहीं भेटिँदैन । तर अहिलेसम्म गृहसचिव, आर्यजीपी, एआईजी, डिआईजी, एसएसपी र एसपीसम्मले शक्ति र पहुँचका आधारमा दास प्रहरी राखेका छन् । राजश्व छलेर सुनको कारोबार गर्ने दिपक मलहोत्राका भरिया बन्न रुचाउने विज्ञानराज शर्मा हुन् कि मलहोत्राक पार्टनर नवराज ढकाल किन नहुन् प्रहरी संगठनमा सुधार ल्याउने वकवास गर्थे । अहिले नेपाल प्हरकिो खर्चमा झण्डै उक सय जना तल्लो तहका कर्मचारी घरेलु कामदार भएका छन् । हाकिमको घरको नोकर बन्दा संगठनबाट पाउने फाइदा लिन सकिन त्यस्ता अल्छी क्षमता विहीनहरुको हुन्छ ।
पूर्व एसएसपी भरत शर्माले त छोरीलाई दाइजो नै २ प्रहरी पठाएका छन् । उनकी छोरी अख्तियारमा जागिर खान्छिन् । भ्रष्टाचार काण्ड लागेर डिल्ली बजार खोरमा रहेका पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणाले सात जना राखेका छन् । यस्ता दासको टिम राख्ने उनी पहिलो हुन् भने सुडान काण्ड भिरेका रमेशचन्द ठकुरी कहाँ ३ जना छन् । आफैं मारवाडीको पसल लुट्न जाने पूर्व एआईजी कल्याण तिमिल्सिना आफैं मात्र कानुन बुझेको दम्भ देखाउने, राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ३ जना प्रहरीलाई दास बनाएका छन् । पूर्व एसएसपी लब विष्ट, एआईजी किरण गौतमले पनि ३ जना प्रहरी कजाउनेमा पर्छन् । मदन खड्का, नरेश गुरुङ, नवराज ढकाल पनि २ जना दास पाल्नेमा पर्छन् । त्यसो त प्रहरीमा रहँदा बदनाम घरकी भन्दा परकीसँग रमाउने विरेन्द्रकाबु श्रेष्ठ, तस्कर अशोक अग्रवालको सूर्यलाइफ इन्स्योरेन्सको जागिर भएर ३ जना प्रहरी नोकर राख्न भ्याएका छन् । रमेश शेखर बज्राचार्य अहिले विनोद चौधरीको सिजी कम्पनीमा जागिर खान्छन् । सरकारलाई इन्टर कनेक्सनले व्यापार कर १० अर्ब २७ लाख नतिर्ने विनोद चौधरी सरकारको धनाढ्य सूचिमा नाम लेखाएर चर्चामा आउँछन् । यिनै चौधरीले राज्य ठग्न प्रयोग गर्ने अदालत, उद्योग, अर्थ जस्ता निकायका खाइदेऊहरुलाई प्रयोग गरेर चौधरीको फाइदा दिलाउन प्रहरीका पूर्व हाकिम रमेश शेखर खट्ने गर्छन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिर्ने विनोद चौधरी हिजो एमाले थिए, आज काँगे्रेस भएका छन् । काँग्रेसले चुनाव जित्ला र आफूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छूट गराउने दाउ निवोदको थियो तर चुनावमा त्यो हावा खायो । अहिले सरकारले कर तिर भन्दैछ ।
राजनीतिक रुपमा विशिष्टले सुरक्षा गार्ड पाउने सीमा नराख्दा संगठनको ठूलो पंक्ति ठूलाबढाको दास बनेका छन् । भूपू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्रीका लागि सुरक्षा टिक कति हो ? स्पष्ट छैन । उनीहरुले कति समय यो सेवा लिने ? त्यो लिन किन प¥यो ? उनीहरुले सत्तामा हुँदा गरेको अपराधको कोटा अनुसारको सेवा दिइएको हो ? यस्ता कुरामा सबै मौन छन् । त्यही कारण प्रहरीहरु पूर्व प्रहरीहरुकै घरको अर्दली बनेका छन् । नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको हालत पनि त्यस्तै छ । प्रहरी संगठन विश्वासिलो बन्नुपर्छ । कर्तव्यनिष्ट बन्नुपर्छ । सत्य सेवा सुरक्षणमको टोपी लगायो तस्करहरुसँग मिलेर राज्यमाथि घात गर्ने काम भएका छन् । सुन तस्करीमा प्रहरी मुछिनु, थुप्रै अपराधिक घटनामा प्रहरीनै नाइके भएका छन् । नेपाल प्रहरीप्रति जनताको विश्वास दिलाउन अलिहेको नेतृत्वले कसरी कार्ययोजनाहरु बनाउँछ ? गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक होडबाजी विगतमा जस्तो अहिले छैन । सरुवामा घुस, बढुवामा घुस प्रथा रोकियो भने पनि प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले तल्लो तहको सरुवा बढुवामा घुस खाइसकेको र्चा आउनेथिएन । यी न्यौपाने आर्थिक मामिलामा खतरा रहेछन् । यिनै छन् प्रहरीको प्रवक्ता । कसरी सुध्रेला अर्दली र दास प्रथा ? सरकारले इमान्दारपूर्वक काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको लागि पनि साहस थपिदिएको छ । त्यही कारण व्यवसाय जसको जे छ त्यो आङ्खनै सीमामा बसेका भए प्रहरी, व्यवसायी र राजनीतिक विवादमा पर्ने थिएनन् । सुरक्षा व्यवस्था अहिले मजबुद बन्दैछ । यो सत्य काठमाडौं परिसरका एसएसपी विश्व पोखरेल स्वीकार्छन् ।